कृष्ण गिरी शुक्रबार, असोज २, २०७७
नेकपाका नेताहरुमा वैचारिक बहसमा रुची राख्ने बागमती प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री रामेश्वर फुयालसँग नेकपा विाद र समाधान तथा सरकारको प्रभावबारे नेपाली पब्लिकका कृष्ण गिरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी -
फुटको संघारमा पुग्यो भनेको नेकपा अहिले त चमत्कारी तरिकाले मिल्यो नि यो कसरी सम्भव भएको हो ?
जीवन्त पार्टीमा विचारधाराका विषयमा बहस हुन्छ । तत्कालिन एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्दै आएको थियो, माओवादी केन्द्र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद मान्दै आएको थियो । हामीले दुवै वैचारिक विषयलाई महाधिवेशनसम्मको लागि थाँती राखेका छौं ।
जब कि महाधिवेशनबाट पारित भएका वैचारिक कुरा नै थाँती राखेका छौ । सामान्य विवाद हुनु अन्यथा होइन । अब नेकपाको विवाद मिलिसक्यो । नेतृत्व विवाद समाधान गर्न सक्षम छ भन्ने कुराको यो उदाहरण हो । पार्टीमा विचारको बहस हुनु स्वभाविक हो, यसको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने प्रमुख हो । नेकपामा बहसको सही समाधान भएको छ ।
नेकपाको विवादको चुरो कुरा पदीय भागबण्डा हो कि विचारको ?
विवाद हुनुमा कार्यविभाजनको कुरा पनि रह्यो । साथसाथै सैद्धान्तिक कुराहरु पनि छन्, सैद्धान्तिक कुराहरु अब महाधिवेशनमा गएर हल हुन्छन् । एकिकरणको काममा अब पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । अब सहज भएको छ, विवाद समाधान भएको छ । जुन प्राविधिक र वैचारिक दुवै थिए । जनवर्गीय संगठनको एकता, तीनका अधिवेशन सबै अब हुन्छन् । पार्टीको एकताको काममा लागेपछि विवाद त्यसै कम हुन्छन् ।
एकताको काममा ढिलाई हुनुमा त नेतृत्वमा नै समस्या हो नि हैन र ?
एउटै पार्टीभित्र त कति समस्या हुन्छ, यो दुई पार्टी मिलेर बनेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा नै नयाँ काम भएको छ । पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट विभाजन मात्र हुन्छन् भन्ने थियो । यहाँ एकता नै हुँदैन भन्ने थियो । यो एकता नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्तिले भएको हो ।
यो पार्टी एकताको पक्षमा नेकपाको वैचारिक वहस स्थायी कमिटीमा हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा हुन्छ । चैतमा महाधिवेशनको मिति तय भएको छ । त्योभन्दा पहिला एकताका सबै काम पुरा हुन्छन् । एकताका काम ढिला भएका छन्, अब छिटै हुन्छ ।
पार्टी एकता दुई अध्यक्षको चाहनाले मात्र भएको हो कि अन्य नेता कार्यकर्ताको पनि योगदान छ ?
बसमा हवाइजहाजमा जति प्यासेन्जर बसेपनि ड्राइभर र पाइलट त एक अथवा दुई जना हुन्छन् । यो कुरा नेकपाको हकमा पनि लागु हुन्छ । दुई पार्टी एकता हुँदा दुई अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण छ भनेको हो । अरुको योगदान छैन कसैले भनेको छैन । यो पार्टी बन्नुमा सबै नेता कार्यकताको मेहनत छ ।
अन्य नेताहरु र कार्यकर्ताको कुनै भूमिका छैन, कम्युनिस्ट त सामूहिकतामा विश्वास गर्छन् तर केपी ओली र प्रचण्डको मात्र गुणगान गाउनु त पूँजीवादीको हिरोइज्म होइन र ?
सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई विश्वास गर्छौं । त्यही भएर केन्द्रीय कमिटी छ, स्थायी कमिटी छ । यो सबै सामूहिकताको प्रमाण हो । अहिलेको आवश्यकता एकता थियो, यो असम्भव कामलाई सम्भव तुल्याउनु नै सामूहिकतमा भएको हो । दुई अध्यक्ष पनि त सामूहिकता हो ।
जस्ता विवाद पनि समाधान गर्नु भएको छ, यसको जस दिने हो । कुनै हिरोइज्म होइन । यहाँ सबै नेता कार्यकर्ताको जिम्मा छ, महत्व छ ।
नेकपालाई जनताले धेरै विश्वास र भरोसा गरेर करिब करिब दुई तिहाइको जनमत दियो । तर यो सरकारले जन अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन, कहाँ चुक्यो सरकार ?
फूलको आँखामा फूलै संसार काँडाको आँँखामा काँडै संसार भनेको यही हो । सरकारको कामको विरोध गर्नु काँडाको आँखामा काँडै संसार मात्रै हो । यत्रो कोरोनाको महामारीमा काम गरिहेको छ सरकार । छिमेकीहरुले भन्दा राम्रो काम हामीले कोरोना महामारीमा गरेको छ । समयमा लकडाउन गरेर नागरिकको जीवन रक्षा गरेको हो ।
यो महामारीमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार चुकेको छैन । पहिला कोरोनाको परिक्षण गर्ने ल्याब थिएन, आज स्थानीय तहसम्म ल्याब पुगेको छ । विश्व नै आक्रान्त छ, हामीले संकट टारेका छौं, संकल्प लिएर लागेका छौं । राष्ट्रियताको मामलामा हामी सफल भएका छौं । सबै राजनीतिक दल राष्ट्रियताको सवालमा एक ठाँउमा उभिएका छौं, यो सरकारको सफलता हो ।
तेल पाइपलाइनबाट आउन थालेको छ, रेलको काम हुँदै छ । अहिले अंकको आधारमा कुरा गर्ने हो भने हामी प्रगतिमा छौं ।
कोरोना भाइरस महामारीमा पनि ओम्नी काण्ड भयो । औषधि खरिदमा मन्त्रीहरुबीच नै विवाद भए । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली लिन दुबई पुगेको जहाज रित्ता फर्कनुप¥यो, यसलाई कसरी हेर्ने ?
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कि छैन हेर्ने हो । त्यो राज्यका सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरिरहेका छन् । यसको स्पष्ट छानविन हुन्छ । यो काम अब राज्यका सम्बन्धित निकायको जिम्मामा छ । काला छन् कि गोरा छन् सबै प्रष्ट हुनेछ । यसमा अब बहस भन्दा पनि परिणाम हेरौ । कानूनले सबै स्पष्ट गर्ने छ ।
महामारीको समयमा औषधि र उपकरण किन्नु पर्ने थियो । त्यसमा केही तलमाथि अथवा छिटो किन्नु पर्ने भएर केही भयो भने पनि त्यसको सत्यता बाहिर आउँछ नै । कयौं कुरामा समन्वयको समस्याले केही अप्ठेरा भएका होलान् । जहाज विदेशबाट रित्तो फर्कनु पर्दा मर्का परेको हो । तर पनि सरकारले सच्याएको छ ।
अर्को पक्षका नेताका पनि कुरा सुनौं : जोगी र भैसीको कथाजस्तै पद मिल्दा धेरै कुरामा लेनदेन भएको छ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २, २०७७ १६:१६
आइतबार, असोज १८, २०७७ १८:१० ‘अराजक मात्र होइन, म महाअराजक हुँ’
शुक्रबार, असोज ९, २०७७ १०:४८ ‘आफ्नै जीवनलाई बिर्सेर हिँडिएछ हौ’
मंगलबार, असोज ६, २०७७ १७:४१ ‘महारानी’ २०० वर्षअघिको इतिहासको पुनर्लेखन
शनिबार, असोज ३, २०७७ १६:५५ 'समस्या संविधानमा होइन, कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो विवेकमा हो'
शनिबार, असोज ३, २०७७ ११:०३ साझा अधिकारका निम्ति संघले छिट्टै कानुन बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री राई